Hlanganisa abashayela Ukubonisana. Umbiko wethu wokuhlola uyasiza
Qala Baby & Child Ukuzilibazisa nokuhamba Kombikinderwagen
1 I-combi-trailer - indlela engokoqobo yokuthutha ingane
2 I-combi-trailer - imodeli ye-3in1 enegunya lobunikazi
3 I-combi-trailer - ingasetshenziswa kanjani
4 I-Kombikinderwagen - okufanele ibhekwe ekuthengweni
5 I-Kombikinderwagen - izinzuzo zayo eziningi
6 I-Kombikinderwagen - ingaba nemiphumela emibi
7 I-combi-trailer - lapho ukuyisebenzisa khona
8 I-combi-van yanamuhla-banakekele imishini kanye nentengo
9 I-Kombikinderwagen-isilondolozi sesikhala semvume sokuthutha ingane
I-combi-trailer - indlela engokoqobo yokuthutha ingane
Ingabe yesithathu yokugcina sokukhulelwa ufinyelelwe, ngakho Onqobayo ezinye umama okhulelwe yokwelapha kweqiniso okudayisa, lapho ngisho namuhla namanje stroller efanelekayo ingenye ukuthenga izinto ezinkulu ingane. Uma ubungase ungaqiniseki ngisho embhedeni ukuthenga ukuthi sombuso kanye uhlaka idingeka ngempela, njengoba kuphele ukuchichima stroller onobuhle ahlukahlukene ukuze aqhube izinselele kuthanda. Ingabe unina namhlanje ube stroller for ukugijima noma stroller bendabuko kumelwe. Kodwa ngisho okuthiwa ikalishi ngoba umntwana kufanele kube khona. Manje yisikhathi sokuba patent umklami imibono lapha Kombikinderwagen Kungaba lesikahle.
I-combi-trailer - imodeli ye-3in1 enegunya lobunikazi
Uma isinqumo se-pram elungile emhlabeni wezitolo ezithintekayo kunzima, khona-ke umuntu kufanele athathe amalungelo obunikazi obunamathele ahlangene. Uma inani lezingane elifisa lingagcini kumntwana oyedwa noma amabili, ukuthengwa kwamanye amodeli emoto kungase kube okufanelekile. Kodwa emndenini omncane osemncane onomntwana, lapho imoto yemoto inikelwa khona ngemuva kwengane yokuqala noma yesibili kubangani, kuwufanelekile ukuhamba kwezingane ezihlangene. Ngokugcwaliswa kwayo kwezingxenye kanye namathuba okuguqulwa, kuhle futhi kusebenze, ukuze zonke izingane ezintathu zikwazi ukuhamba nazo lapho zihamba emgodini wemithwalo.
I-combi-trailer - ingasetshenziswa kanjani
Imoto yokuhlanganiswa ngokuvamile imodeli enevili ezine, lapho ingane ingaba khona okokuqala njengengane. Ukwengeza kunamathuba okuhlanganisa isitsha somntwana, esetshenziswa kakhulu emotweni. Uma ingane ikhudlwana, khona-ke umqhubi uzoba yizinyathelo ezimbalwa ezenzakalini futhi konke lokhu kuzobe kunomqhele wabakhiqizi abaningi, ngoba ukulethwa kusenayo isikhwama inabukeni endaweni efanayo. Ungathola ngisho nesembozo semvula, isembozo sezinyawo noma umnikazi webhola kanye nosizo ukwenza ukuvakasha nengane emotweni yemoto kube injabulo. Uma kukhona isikhwama esishintshayo ekulethwa kwezidingo, khona-ke lokhu kufanele kuguqulwe kube yindlela yokushintsha eshintshayo. Konke lokhu kungenziwa ngokuhamba futhi ngisho nokufakwa kungenziwa kalula futhi kulula. Ifreyimu enezintambo ezine nesibambo esikhulu singase siphume kahle kakhulu emva kokusetshenziswa, ukuze imoto ithole indawo yayo ngaphandle kwebheyi lomntwana noma ukuhamba kahle emthini. Izindebe zezingane noma izintambo zingagcinwa kahle emotweni ezihlalweni, ukuze umntwana angakwazi ukuphepha ngokuthula futhi ngokuthula.
I-Kombikinderwagen - okufanele ibhekwe ekuthengweni
Uma i-stroller ehlangene ibonakala iyona engcono kakhulu emindenini eminingi, kufanele uzibuze ngaphambi kokuthenga, kodwa imibuzo eminye, esiza ukugwema ukuthenga kombi-van. Into yokuqala yokubuka imoto yomndeni kwakuwumbuzo wokuthi ngabe umqhubi wanamuhla e-Kombistyle wayezohlangana ngempela nesiqu. Uma usuhamba ushayela endaweni yakho ngemoto yakho encane evamile, uzothola izinkinga uma ufuna ukucima uhlaka olugqinsiwe lomgibeli esihlahleni. Kuhluka kwemikhaya yanamuhla yemoto kufanelana nalokhu kodwa okusemqoka ngakho umndeni ungathenga ngesithuthuthu umthamo ohlangene. Sekuvele isimo sakho sokuphila singabamba iqhaza ekukhethweni kwemoto efanelekayo yemoto, ngoba ihlala njalo mayelana nabakhamuzi bezakhamuzi noma umuntu kufanele akhethe izindlela ezifundeni zasemaphandleni. Kodwa futhi umbuzo wokuthi le moto imoto iyakufanelekela yini ukusetshenziswa kwebhasi nesitimela kungabalulekile kwisinqumo sokuthengwa kwemoto inhlanganisela engcono kakhulu.
uhlala phansi ephakeme, kungekho lift, ungabhekana kanjani ubahudule stroller futhi ubheke ekhaya. Ngalesi sizathu, imoto efanele ingane kufanele ifanele ukuthenga ngezingane. Mhlawumbe hhayi kuphela ingane eyamemezelayo, kodwa amawele noma ngisho ne-triplets kulindeleke. Khona-ke kuphakama umbuzo, lokho stroller manje lesikahle kungenzeka ukuqinisekisa ukuthi zonke izingane kungaba ukhululekile futhi zingacindezelwa elivela kumama ngaphandle kwezinkinga. Futhi uma i-stroller ehlangene iba yinkinga, khona-ke omunye umbuzo uvela. Ngoba ingane manje ibheka njalo umama bese uhlala noma kufanele ube nesiqondiso esifanayo nomama. isinqumo esinzima kuyinto komama yezemidlalo, ukukwazi ukuba lapha ukukhetha imodeli izindinganiso pram kuhlanganiswe namanje dreiräderiges ejwayelekile ukugijima imodeli wokugijima ojabulayo noma ubaba yezemidlalo. Ingabe ufuna ukukhulisa ingane yabo ngendlela idyll yasemakhaya, ikhwalithi amathayi Kumele kuqashelwe, ukuze drive akuyona imikhondo okusheshayo e umonakalo ehlathini phansi namatshe.
I-Kombikinderwagen - izinzuzo zayo eziningi
Into yokuqala okumele uyikhulume yiqiniso, intengo enhle, ngoba uma kuzodingeka uthenge izingxenye njenge-stroller ehlangene, lokhu kungaba kubiza kakhulu. Ngaphezu kwalokho, manje unayo zonke izingxenye zombala ofanayo. Ngakho-ke ingasetshenziswa futhi izingubo zokugqoka nemithwalo yengane, ngoba omunye uzothola umbala ofanayo kuzo zonke izingxenye. Uma ingane ikhula, akudingekile ukuthenga i-carriage entsha yezingane futhi imane ibeke enye ingxenye kuhlaka. Lokhu kusindisa izindleko futhi kushiya indlela yokuthengwa kwezinye izinto ezibalulekile ezinganeni, ezisetshenziselwa ukuhambisana nobudala. Enye inzuzo yiyona impilo ende yenkampani yemoto, nabanye abakhiqizi ababeka isisindo ku-15 kg bese bexhuma kuze kube neminyaka emithathu kuya kwemihlanu nengxenye. Inzuzo enkulu yizici eziningi ezifakiwe ekulethwa kwezidingo, ngakho-ke ngisho nekhwama ye-diaper nezinye izinto ezibalulekile ezinganeni zihlanganiswe nokuthengwa kwezingane futhi akudingeki zithengwe ezibizayo.
I-Kombikinderwagen - ingaba nemiphumela emibi
Ngeshwa, i-rack eyodwa kuphela etholakala kumodeli we-combi-van, ukuze ingane elandelayo idinga ukunakekelwa ifreyimu entsha noma imoto yemoto ehlanganisiwe yesibili ithengwe. I-stroller ehlangene yenzelwe ingane eyodwa kuphela ukuyithenga. Ngokwakha njalo nokudiliza umgibeli, ukugqoka umonakalo kungenzeka ngokushesha. I-stroller akuyona imodeli ejwayelekile, ukuze izinamathiselo zamanye amamodeli we-pram angeke afaneleke kumodeli wakho we-pram. Njengoba lokhu kuyisibonelo esinamavili amane, umama wezemidlalo kufanele athenge imodeli yokugijima ngamasondo amathathu kunoma yikuphi. Kuzo zonke izinamathiselo, ukuqondiswa kombono wengane kuqondiswa kumama futhi ngeke kuguqulwe.
I-combi-trailer - lapho ukuyisebenzisa khona
Inkinga enkulu emindenini eminingi emisha iyisithameli ngemuva kokusetshenziswa. Uma kufanele abe esitebhisini, akumelwe abe mkhulu kakhulu, futhi ukwesaba ukweba noma ukwehliswa kwempahla kungase kuphakame kuye ngokuthi indawo yokuhlala. Kufanele uhlale uhlale ku-5. Isitezi ngoba akukho ikhefu etholakalayo. I-combi-trolley ifakwe ukugcina isikhala kakhulu ngakho-ke kulula ukuthutha. Nokho, ekugcineni, kuvame ukukhuphuka izitebhisi kuze kube yilapho ingane, khona-ke izikhwama zokuthenga nezinqola zamantombazane zisendlini. Kungcono ikhaya, lapho uhlaka kanye nokwakhiwa kugalaji kuhlala khona. Noma kuwukuphela kwento ephawulwe lapha futhi ingane ihlanganisa ne-tub baby noma i-tragetasche ethathwe endaweni ephilayo.
I-combi-van yanamuhla-banakekele imishini kanye nentengo
Njengawo wonke imikhiqizo ongayithenga, intengo yinkomba eqondile yokuthi ukulungiswa okungcono kuqinisekisiwe. Manje, izinto ziyanelisa, njengoba ukufakwa njalo kwefreyimu kungaholela ekulimaleni kokuthuthwa komntwana ngemva kwezinyanga ezimbalwa kuphela. Ukumiswa okuhle noma ikhwalithi yama-mattresses, konke kungasiza ingane kule moto yemoto ngokukhululekile. Ngaphezu kwalokho njengenhlangano isizathu esibalulekile ukuthi ingozi alikho endaweni stroller ezenziwe kahle ukuthi kuhlulekile shopping, imoto ngokuzumayo inkonzo umthwalo wengane esindayo futhi izimpahla kanye ukulimala futhi wenze ukuthenga okusha kunesidingo. Ikakhulukazi ukusetshenziswa okude kuze kube yilapho enkulisa ye-kindergart kwenza kube khona ukuthi umgibeli onjengoba njalo uyisibonelo esinamandla kakhulu. Yingakho kuhlale kubalulekile ukuthenga imoto enjengomntwana ocabanga ukuthi uyayidinga imoto enganeni. Ukuqhathaniswa nokuthengwa kwezimoto ngabanye akufanele nje kubheke kuphela intengo, kodwa futhi izinzuzo zansuku zonke kufanele zicatshangelwe.
I-Kombikinderwagen-isilondolozi sesikhala semvume sokuthutha ingane
Ingabe wanquma ukuthenga i-stroller kuhlangene, ingane yakho ingakwazi ahlale lapha ohambo kusukela ekuzalweni enkulisa yobudala kahle noma ulale. Ukubukeka kwe-assortment kuzokumangaza, ukuthi i-combi-van ingaba yinkinga kangakanani nokuthi zingaki izingxenye ezingaba nayo. Lokhu kungasho ukuthi umgibeli omuhle waloluhlobo uyobuye akhokhe i-1000 Euro. Isipho esiwusizo kakhulu uma ufuna ogogo nomkhulu njengozukulu wokuqala. Lapha, kufanele kakade ukufuna imodeli ezibizayo futhi ezenziwe kahle, ngoba kuyinto stroller evamile nje nendlela eliphethwe ngayo isetshenziswe njengesibonelo kuhlanganiswe namanje ngokuvamile kakhulu kabusha futhi kusheshe kuholele ukugqoka futhi umonakalo uma into akuyona izinga okusezingeni futhi ukucubungula kuyimpofu. Ukuthenga okuzuzisayo kokuba abazali, uma zonke izithako zabazali ziwusizo ngempela.
Urbano pram stroller baby car seat 3in1 system seat car (U2-Old Forest) isibonisi
I-SET Ibandakanya: * I-Pram / i-Buggy * Isihlalo Semoto, * Isikhwama Sokulala, * Isikhwama Se-Diaper kanye ne-Basket Yokuthenga, * AmaLeig Guards, * Isembozo Sangemuva neMosquito Net,
UKUphepha: I-stroller ihlangana ne-EN1888 yaseYurophu yezokuphepha, isihlalo sezimoto i-ECE R44 / 04, Yenziwe e-European Union,
I-3-in-1-SYSTEM Konke okudingayo kusethi eyodwa. Ukusuka esihlalweni semoto kuya esikhwameni sokuthenga kuya kubhodi lomdlalo. Yonga isikhathi nemali ngaphandle kokuthi ucwaninge ekuhlinzekeni okuningi. Isethi yethu iqukethe konke ingane yakho eyidingayo ohambweni oluphephile nolunethezekile. * Ukuguqula amasondo angaphambili Amasondo angaphambili aswayimane akuvumela ukuba uhambise kalula imoto, ushintshe noma uthenge esitolo sezitolo ezinkulu. Uma ufuna ukuthatha uhambo oluya emaphandleni,
ISIQINISEKISO Ungashintsha ngokushesha, kalula futhi ngokwemvelo imvelo yesibambo noma i-footrest. Ungavula iwindi eliphezulu noma ugoqe i-canopy. Namathisela isithiyo esivimbayo noma insiza yomdlalo. Khweza isembozo somlenze noma isikhwama sokulala. Futhi okuningi.
ISisindo: I-14 kg Ububanzi: I-60 cm ukuphakama Ukuphakama: 114 cm ukuphakama kwesibambo: 83-120 cm Stroller (isikhungo): 35x86x61 cm (W x L x H) Isihlalo semoto 3,2 kg Ngaphandle kwamamitha: 43xNNX68NUM47NUMXLUM25LUM72LUMXLUM97LUM42 (W x L) Iphakethe: 62xXNUMXxXNUMX cm
I-Kinderkraft 3 ku-1 JULY, i-stroller set, i-stroller yokudibanisa, i-buggy, imoto yemidlalo, i-carcot, isihlalo sezingane, izikhundla ezi-3 zokuhlala, ibhasikidi lokuthenga, ibhande lesihlalo lamaphoyinti angu-5, ntofontofo xaxa, ukubukisa kwe-pink
AUTOKINDERSITZ IM SET - Im Set ist der Kinderwagensitz mit einer Einlage für Säuglinge enthalten. Von den ersten Lebenstagen an wird es als Kindersitz und Baby yenethiwekhi sebenzisa
I-Kinderkraft 3-in-1 stroller VEO, i-stroller set, i-stroller ehlanganisiwe, i-buggy kanye ne-trecot endaweni eyodwa, isihlalo sezingane, ukumiswa kwezigaba ezimbili, amasondo amakhulu, ukugoqa okusheshayo, ukubonisa okumpunga
IHauck Pacific 3 Shop N Drive combi pushchair 6 izingcezu ezifika ku-18 kg + isihlalo sabantwana + okugeza kwengane okuguqukayo kube yisihlalo esiguqukayo sesihlalo sembozo, ukukhanya, isibambo esiguqukayo, amasondo amakhulu amaningi, isibonisi esimnyama
I-3 KWI -chairchair set - ebhavini elikhulu lokugeza lezingane (kusukela ekubelethweni kuze kufike ku-1 kg), isihlalo sengane ngaphandle kwe-Isofix (kusukela ekubelethweni kuze kufike ku-9 kg) ne-buggy umthwalo ongafinyelela ku-13 kg (18 kg carriers + 15 kg basket)
I-BABY BOWL - Isihlalo semoto sezingane i-Zero Plus kufanelekile kusukela ngesikhathi sokuzalwa kuze kufike ku-13 kg futhi iqiniswa ngokushesha emotweni isebenzisa ibhande lemoto elinamaphoyinti amathathu futhi ichofoze kufreyidi le-stroller ngaphandle kwe-adaptha
OKUFANELEKILE - Iphakethe lesikhala esikhulu singaguqulwa sibe yisihlalo esibuyisele emuva, ngenkathi isembozo esifakiwe Fußsack ingahlanganiswa
IMANEUVERABLE - Ngenxa yamasondo amakhulu, swidingling and lockable front wheel and nokumiswa, buggy kwezohambo kulula ukuqondisa
SAFE - Isihlalo sezingane iZero Plus inebhande lamaphoyinti amathathu futhi ihlolwe i-ECE 3/44; I-stroller inebhande lamaphuzu ayi-04 futhi ihlolwe ngokuya nge-European 5 standard ejwayelekile yokuphepha
Mountaineers Capri stroller 3 1 e Kombikinderwagen Megaset 10 izingcezu kuhl. Baby imoto esihlalweni, umntwana okugeza, izimoto ezemidlalo kanye izesekeli isikhangiso
UKUNIKELWA KWE-HUGE ✓ Le phakethe le-stroller alishiyi lutho olufiswayo futhi lizohamba nawe nengane yakho kusukela ebuntwaneni. Kuhlanganisa zombili isihlalo sezingane (semoto), okugeza kwengane nesihlalo sokucindezela (isiphazamisi). Izinamathiseli ze-stroller ngazinye zingashintshwa endabeni yemizuzwana. Ukwakhiwa okuyinkimbinkimbi kulula ukuyisebenzisa. Ngenxa yesisindo esisezingeni eliphansi kanye nokwakheka okuncane, ungamfaka kalula i-stroller emotweni.
UKUPHEPHA KUSENZA ISIQINISO ✓ Ngalesi sihlanganisi esihamba ngaso sonke isikhathi uhlala ngasohlangothini oluphephile. I-Bergsteiger stroller ihambisana ne-European1888 standard standard yezokuphepha, echaza izidingo zokuhamba kwabahamba ngezinyawo. Zonke izindwangu ezisetshenzisiwe ziye zahlolelwa i-Oeko-Tex Standard 100 ngakho-ke zibhekwa njengezingenangozi ngokuphelele. Ngaphezu kwalokho, njengomkhiqizi, sivame ukufaka ikhomishini yokucwaninga eyaziwayo ukubheka ukuthi ayinazo izinto eziyingozi.
ISIQINISEKISO SIKhulu SEZINGANE SAMAHHALA ✓ I-Bergsteiger Capri stroller ayigcini ngokuguquguqukayo, futhi futhi ingumbambisi wamehlo ngokuphelele. Isikimu sombala sanamuhla maqondana namathayi amakhulu we-pneumatic kanye nezinsimbi ku-chrome kubukeka kuqinisekisa ukubuka okuhle. Okunamathiselwe ngakunye kwe-stroller nesikhwama se-diaper ebanzi kufakwe esikalini sokulethwa kwe-nestle ekuklameni okuhle kwe-stroller.
IMALI YOKWENZIWA KOKUKHANYA / YOKWENZIWA KOKWENZIWA KWESISEKO ✓ Noma ngesikhathi sokukhulelwa nokwenziwa kokuqala, sigxila ekuphepheni, ekududuzeni nasekuklameni - ngentengo engabizi. Ama-strigler e-Bergsteiger anikela ngezici ezihlukile nekhwalithi ngesilinganiso sokulinganisa ngentengo / ukusebenza okuhle. Akusikho isizathu ukuthi abahamba ngezinyawo bethu baqala ukuthandwa.
INKONZO YAMAKHASIMENDE AQHAWULAYO ​​str I-stroller ihlolwe kaninginingi futhi imvamisa yaba ophumelele ukuhlolwa. Ngesikhathi sokukhiqiza, kufakwa kuphela izingxenye eziqinile, ukuze uzokujabulela ukuhambahamba isikhathi eside. Uma ngabe kusenenkinga, insizakalo yethu yamakhasimende eBerggiiger ihlala ikhona kuwe.
I-LCP Izingane 3in1 ithambile i-Lucato i-pneumatic tire induduzo nge-warranty yamahhala, umbala: i-cocoa indicator
Izinyanga ze-Baby 0-36 ziphelele; Ukuphumula kwekhanda lokuguqula ukugeza (L / W / H) 80x37x22 cm
I-Buggy ngokushayela nokushayela isiqondiso; I-backrest elungiswa ukuma endaweni
Push ukuphakama kwesibambo 77-121 cm wengane ye-0-13kg Isiteshi seqoqo se-Isofix singasetshenziswa kabusha
Efana namathayi we-pneumatic induduzo ne-warranty yamahhala ehlulekayo; Ukuphakama kwesibhakela 41 cm;
Ubukhulu (L / W / H) 101x61x112 cm; Ifakwe (L / W / H) 80x61x33 cm; Amasondo ohlaka 9 kg; Umbhede womntwana kanye nomgibeli we-5 kg ngamunye; Izingane zihlala 3 kg
siphoI-Bestseller cha. 7
I-Kinderkraft 3 ku-1 MOOV stroller, stroller set, car car, buggy kanye ne-trecot koyedwa, isihlalo semoto yezingane, amasondo amakhulu, amathayi aphezulu we-pneumatic, umsebenzi osebenza ngawo, ukhululekile, ukubonisa okumpunga
Kinderwagen Buggy Kombikinderwagen ABC DESIGN SALSA 4 AIR Kollektion 2020 (DIAMOND ROSE GOLD, 2IN1)Anzeige
UFryrich Hugo Hamburg | I-3 ku-1 combi stroller ephelele seter | Amathayi enjoloba anamandla | Umbala: Isikhombi se-Cream & Beige
THE Frederick HUGO Hamburg 3 1 e ISETHI: The big Hamburg iqoqo Friedrich HUGO iya wena nengane yakho kusukela usewusana kuze 4. Iminyaka. Ukuthembeka, ukuzinza, lula futhi zonke efanelekayo edolobheni, emahlathini, imigwaqo yobhuqu amanzi emvula namatshe okugandaya. Izakhiwo eyinkimbinkimbi futhi omkhulu ziyojabula wena kanye nengane yakho. Uhlelo Quick-Chofoza evumela konke okunamathiselwe kukhona kokubili ezifuywayo ebhekene nasemuva ukuba bahlangane.
Friedrich HUGO Hamburg iza 3 Tindzaba kwamahhala. I padded ingane yenethiwekhi nge kumatilasi isetshenziswa kusukela ekuzalweni. Ukuze ezokuthutha esihlalweni imoto emotweni ifakiwe. Ngaphezu kwalokho, kungenziwa uchofoze uzimele. Iqinisekisiwe ukuze ECE R 44 / 04 esihlalweni uthembisa ukuphepha esiphezulu, ezizibeni padded futhi umcamelo esihlalweni. Kusukela 6. Nyanga zonke zisebenzisa indzabambhalo ikalishi ne esikhiphekayo ukuphepha ibha futhi umsebenzi ubuthongo.
KUNGANI UKUKHETHA Frederick HUGO Hamburg: Isitifiketi EN 1888: 2004; kancane padded, kulula ukushayela inhlangano fast and disassembly amayunithi esihlalweni ubuchwepheshe Quick-Chofoza, lokungcolisa encane emotweni, 2 ukuziphilisa ukumiswa kwi big 12 intshi amathayi, ukumiswa kwamasondo swivel, efanelekayo zonke evele. Sizing Nezimo push isibambo kokubili abazali eJalimane yakhelwe, iminyaka 2 yesiqinisekiso
I-VIDEO: Iya ku-Youtube futhi ubuke isiteshi se-Pro Concept Store. Lapho uzothola amavidiyo amaningi nezibonelo zokusebenza ku-FRIEDRICH HUGO HAMBURG
UKUQALA KWAMAHHALA? Siyaqiniseka ngekhwalithi enkulu ye-FRIEDRICH HUGO HAMBURG kanye nenani eliyingqayizivele lentengo / ukusebenza. Zama i-FRIEDRICH HUGO HAMBURG ngokuphelele izinsuku ezingu-30 ekhaya. Uma ungenayo intshiseko, sizoyithatha imoto ngqo futhi sibuyisele intengo yokuthenga ku-100%.
I-cbx 3-in-1 pram kit Leotie Pure 12-ingxenye ethwala izinsana i-Shima, i-baby foldable yezithwala, ikhava yemvula ye-2x, inethi yomiyane ye-2x, inkomba yeComfy Grey
Ihlomele kahle ukusuka ekuzalweni ku: Isethi enemigqa esezingeni eliphezulu futhi esezingeni eliphakeme (i-12-ingxenye) nge-pram (kusukela ekuzalweni kuya ku-15 kg), isithwali sensiza yezinsana (kusukela ngesikhathi sokuzalwa kuya cishe ku-13 kg) nezinye izinsiza ezisebenzayo - Okokuhamba kwansuku zonke nokungahambi kahle
Okokusebenza okubanzi okuphelele: i-pram isetha i-Leotie Pure ngohlaka lwe-stroller, isihlalo semidlalo esiguqukayo kanye nokugeza kwengane okugoqekayo kosana abasanda kuzalwa, i-Shima yezithwala, i-1x yesaka elishintshayo, i-2x inethi yomiyane, ikhava yemvula ye-2x, i-2x windscreen (yokugeza izingane / ukuhambisa izinyawo kanye nenkwali yezingane)
Kuhl. I-Baby Carrier Shima yezingane kusukela kuzalwa kuya ku-approx. Izinyanga ze-18 (iqembu 0 +, i-0-13 kg): Uhlolo lwe-ÖAMTC lwezokuhlaliswa kwengane 11 / 2018: "KAKHULU 2,2", okunamathiselwe ngebhande lesihlalo semoto noma ngesisekelo se-ISOFIX (i-Shima Base). faka osanda kuzalwa
Pram enama swivel namasondo angaphambili avulekayo, ukumiswa okuthambile okunamasondo amane, ukugoqa okulula usayizi we-compact (41 x 65 x 106 cm), 3 seat seat and recliner, XXL sun canopy, basket basket wide
Ububanzi bokuhlinzekwa: I-1 pram kit Leotie Pure (i-12-ingxenye), Uhlaka lwezinto ezibonakalayo: I-Aluminium, Isembozo sezinto ezibonakalayo: 100% polyester, Dimensions stroller (LxWxH): 101 x 65 x 114 cm, Seight weight: Grefy Grey
Isihloko sangaphambilinicat ukudla